Akhriso: Wararkii ugu dambeeyay ee Galmudug iyo qorshaha dowladda oo qarka u saaran inuu… – Somali Top News
Akhriso: Wararkii ugu dambeeyay ee Galmudug iyo qorshaha dowladda oo qarka u saaran inuu…
June 22, 2019 Somali Top News	0 Comments
Wararkii ugu danbeeyay magaalada Dhuusamareeb xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya inuu weli halkaasi ka socdo dadaal lagu doonayo in lagu kulansiiyo Madaxweynaha Galmudug iyo Wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumadda Somalia ee shalay halkaasi tegay.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa isku dayey shalay inuu hor istaago wafdiga Wasiirka Arrimaha gudaha, taasoo uu ku guuldarreystay markii ay ogolaadeen Ahlu suna, waxaana diiday inuu qeyb ka noqdo wadahadalka Wasiirka iyo madaxda xukuumadda Galmudug Sheekh Axmed Shaakir.
Waanwaan iyo kulamo kala gaara oo maanta oo dhan ka socday magaalada, ayna qeyb ka ahaayeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Federaalka iyo Maamulka Galmudug ayaa wararku sheegayaan in Madaxweyne Xaaf uu ogoalaaday inuu la kulmo wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Maxamed Sabriye.
Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Axmed Shaakir ayaa la sheegay inuu dadaal weyn u galay arrintan, waxaana lagu wadaa in caawa ay kulmaan Wasiir Sabriye, Xaaf iyo Sheekh Axmed Shaakir.
Arrinta ugu weyn ee la isku hayo ayaa ha qorshaha xukuumadda Soomaaliya ee ah in doorasho ka dhacdo maamulka Galmudug oo waqtigiisa uu dhammaaday, iyadoo dhinaca kale uu hadda kazoo jeedo Madaxweyne Xaaf, markii Ahlu sunada la midowday Xaaf ay kasoo debceen fekerkoodii hore.
← Senior Somali officials optimistic about upcoming polls
Maxaa ku hoos duugan Siyaasadda Dowladda Dhexe ee ku wajahan maamul Goboleedyada? →
Madaxweyne Farmaajo Oo Baarlamaanka Soomaaliya Ku Amray In Ay Kaalintooda Ka Qaataan Hirgelinta Hay’adda Qaran Ee Naafada
Maxkamadda Ciidanka oo xukun ku ridday rag loo heysto qarax sanadkii hore ka dhacay Muqdisho
September 12, 2019 Somali Top News 0
Ciidamada dowladda oo dib ula wareegaday dagmada Balcad
March 19, 2019 Somali Top News 0